Ukugqitywa kokusebenza + kwesandi kunye noMerey Şenocak kunye noSteve Schofield | INDLELA · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
« NDijonge: ISyria kwiFoto nakwiNgcaciso-iMiboniso yoMfanekiso
بتحصل - betahssul - iyenzeka »
Nge-8th ka-Okthobha, siya kuthi bhiyozela ukugqitywa komendo kwiTempelhofer Feld ujikeleze ufakelo kunye nepikniki edibeneyo kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba. Amagcisa eFowuni evulekileyo- imvumi UMizgina Rengin kunye nomdlali weqonga Xueqing Yu, IiPlani zeAina, uElisa Kostka noJohanna Schmalöer iya kubonisa nemidlalo yabo apho.
// Umsitho uqala ngo-16: 30
Emva koko, UMerey Senocak kwaye USteve Schofield uya kwenza inkcazo yemibongo kunye nesandi
// Ukuqala nge-18: 00
Ubhaliso olongezelelweyo luyafuneka >> Qhagamshela apha
Kuya kuba kuhle! Sijonge ukubhiyozela ukuvalwa kweNdlela nawe!
Malunga neNtsebenzo evulekileyo yokufowuna:
Ukulahla iingoma nguMizgina Rengin
UMizgina Rengin ucula ezinye iingoma zabasetyhini, iithoni, ingxolo, iilwimi kunye neengoma ezingavakaliyo, uhlala ukhangela kwaye ubuza imibuzo. Ukuxovwa kweengoma zomculo we-diasporic ngumrhumo wokwakha iibhlorho zemibongo phakathi kwangoku kunye nokudlulileyo kunye nokuwela umda weemvakalelo kunye namabali.
Ukhutshiwe -Ukusebenza kwentshukumo kwangoko
Ukuhamba kukunganyibiliki komzimba kunye nokusingqongileyo. Abadlali ababonakali njengezifundo. Amagcisa anceda kuphela ukubonisa amandla angaphakathi okusingqongileyo, ukufakwa kunye nabantu ngokwabo, kunye nobudlelwane obuhamba phakathi kwabo.
Indlela iqhubela isihlwele phambili, kodwa ikwathintela ulwalathiso kunye nendawo yokuhamba. Kuluntu oluhambayo apho yonke into ihamba, itshintshayo okanye itshintsha ngokukhawuleza, sifumana indawo entsha kwindawo entsha, konke okusingqongileyo, abantu, izandi zihlala zibumba indawo kwaye zichaphazela indawo yethu yangaphakathi, ngelixesha imvelaphi yethu isondele kuthi. Isaci samaTshayina 身首异处 (shēn shǒu yì Chù) sithetha ukuba intloko kunye nomzimba womntu ulele kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo, unokusetyenziselwa ukuchaza imeko yokufuduswa kokukhethelwa kunye nokutsala.
Umqalisi: Xueqing Yu // Abadlali: IziCwangciso zeAina, uElisa Kostka, uJohanna Schmalöer, uXueqing Yu
Ukusuka kwinkqubo yokufunda Music and Movement / Eurhythmic kwiDyunivesithi yaseArt Berlin.
UMerey Senocak (Ngo-1993, eTurkey) wafunda ubuGcisa boBugcisa, iMedia-esekwe kwiXesha kwiYunivesithi yoBugcisa eLondon. Unikele kwiminyhadala yobugcisa kunye nemiboniso kwiindawo zikawonkewonke ngemidlalo kunye noomasifundisane eLondon naseIstanbul. Kutshanje uye wenza umculo kunye neemvumi kunye namagcisa abonakalayo kwizixeko ezahlukeneyo. Kunyaka olandelayo uzakufunda kwinkqubo ye-Master of Arts kwiYunivesithi yaseBerlin yezoBugcisa, egxile kwi-Sonic Arts nakwi-Sound Study.
USteve Schofield yimvumi yase UK / Australia. Udlalela izixhobo zomoya kunye neekhibhodi. Ukuhlala eBerlin, uyabandakanyeka ekusebenzeni komculo okuphuculweyo ngokukhululekileyo kunye neeprojekhthi zobugcisa ezihamba kunye. Ubona umculo ophuculweyo njengolwimi olumnandi lokuchaza ukuba yintoni eza kuvakala okwangoku, indlela yokuzisa abaphulaphuli kwiindawo ekwabelwana ngazo. USteve Schofield udlale kwiminyhadala e-Australia, Germany, Spain, India nase Thailand. NgeGENES - itrio yomculo evela eBerlin- wakhupha icwecwe lakhe lokuqala elithi "Presents of Presence" ngo-2020, nelifumaneka kwi-intanethi.
Iprojekthi yePath iveliswe yiOyoun ngokusebenzisana no-Umut Azad Akkel (IG: @lukhanyile) Njengegcisa, umlawuli wezobugcisa, kunye nomlungelelanisi, u-Şehnaz Layıkel (IG: @lungelo_lungel) njengomququzeleli kunye noPegah Keshmirshekan (IG: @iqosweb) kunye no-Ilgaz Yalçınoğlu (IG: @lungelo_mnyama) Njengabaququzeleli bemisitho. Ixhaswe ngemali yiLotto Stiftung kunye ne-UdK KKWV.
Iintshukumo, umboniso, Incoko, Izandi / Izandi